Umatshini-iGuangzhou Baiyi Izixhobo ezikrelekrele Co., Ltd.
Phawu: uyilo olulula, ulungele ukuthunyelwa, ukuphakama ekusebenzeni, kulula ekusebenzeni, iindleko ezifanelekileyo. Ukulungela iphepha, ileyibhile, ibhokisi yephepha, iiplastiki eziqhelekileyo njl.njl zinokudityaniswa nomshicileli we-TIJ, umshicileli we-CIJ njlnjl, okanye inkqubo yokubhala, umshicileli we-laser, oqonda ukushicilela iintlobo zombhalo, umfanekiso njl.
Inokwenziwa ngemfuneko, ulwazi oluthe kratya, pls cofa apha.
Igama lemveliso: feeder yedesika ephezulu
Umzekelo: BY-TF01-400 / BY-TF04-300 / BY-TF02-400
Phawu: uyilo lobungangamsha, olulungele ukuhanjiswa, luphezulu ekusebenzeni, kulula ekusebenzeni, kubiza iindleko. Ukulungiselela iphepha, ileyibhile, ibhokisi yephepha, iingxowa zeplastiki eziqhelekileyo njl.njl.
Inokwenziwa ngemfuneko, ulwazi oluthe kratya, pls cofa apha
Igama lemveliso: Umxhasi weTTO oqhelekileyo
Phawu: Umxhasi weTTO oMiselweyo oManyanisiweyo weTTO ukushicilela itekhnoloji kunye netekhnoloji yokondla ekrelekrele, waqonda ukondla okuzenzekelayo kunye nokuprinta ngokufudumeleyo ngokugqibeleleyo. Abasebenzisi banokwenza ushicilelo kwiingxowa zeplastikhi (kubandakanya iiplastiki, iilebheli, iibhokisi ezigutyungelweyo njl.njl.) Ukuprinta umhla, abalinganiswa, imifanekiso elula, ngakumbi ibhakhowudi eguqukayo, ikhowudi ye-QR kunye nemigca emininzi yokushicilela umxholo wefomathi enkulu. Ubugcisa kwaye ichanekile ； isetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni, ekuprinteni, amayeza, amachiza, ukutya njl njl.
Igama lemveliso: feeder TTO entsha (A / B)
Umzekelo: BY-Model: BY-TF01 / 02-TTO-A / BY-TF01 / 02-TTO-B
Phawu: uphuhliso lwayo lwalusekwe kwi-Standard TTO feeder kunye nokusetyenziswa ngempumelelo kwe-TTO feeder kwiziyobisi zonyango lwezilwanyana, i-pesticide, imbewu kunye nemizi-mveliso yamayeza amaTshayina kunye neentlobo zabasebenzisi. Inokwanelisa kakuhle imicu yombane emxinwa, e-ethe-ethe, emileyo yombane kunye nengxowa yoyilo engaqhelekanga, ibhegi yohlobo lwe-M emininzi, ipokotho yokuvala uziphu kunye nebhegi evulekileyo njl njl. Isantya, uzinzo kunye nokusebenza kunye nokugcinwa kufikelela kubude obungazange babonwa ngaphambili, ngakumbi kusonjululwe ukushicilelwa komntu kwiphakeji yokutya ebhakwe.
Igama lemveliso: feeder TTO emfutshane
Inqaku: yeyona feeder yethu imfutshane yeTTO, yamkela inkqubo eqhelekileyo yokukhuhlana, ifanele uninzi lweengxowa zeplastikhi, ezingabizi mali ininzi. Yamkela ukuguqulwa kwesantya esinye semoto kwisantya. Akukho PLC okanye i-HMI, kulula ukusebenza, ukukhanya kubunzima.
Igama lemveliso: Ukondla okusemgangathweni okuqhelekileyo kunye neqonga lokuprinta / isantya esiphezulu sokondla okukhohlakeleyo kunye neqonga lokushicilela
Umzekelo: BY-TF01 / 02-400
Phawu: yenzelwe ukuprinta okuqhelekileyo (kubandakanya umshicileli we-TIJ, i-HD DOD, umshicileli we-CIJ, ilebheli njl. inemfuno ephezulu kwitekhnoloji, yomelele ngokubanzi, inzima yesicelo. Yamkela ingqiqo, iimodyuli, ulungelelwaniso lwembonakalo yoyilo olukrelekrele. Zilungele iintlobo zamaphepha, ileyibhile, amakhadi, ibhokisi yokupakisha, ngakumbi kwimveliso ngombane ongashukumiyo, ukuzitywina, ibhokisi yeplastiki enemigca emininzi njl njl njl. Kukho umsebenzi onganyanzelekanga ekukhetheni njengokubhaqa kabini, ukulungisa ngokuzenzekelayo, ukwala ngokuzenzekelayo njl.
Igama lemveliso: ukondla okunamajelo amaninzi kunye neqonga lokuprinta / ukondla okusemgangathweni kunye nenkqubo yokuphawula
Umzekelo: BY-MTF02-650 / BY-SF01-TTO
Phawu: yeyokuprinta okuqhelekileyo (kubandakanya iphrinta ye-TIJ, iprinta ye-CIJ, ilebheli njl.njl.) Inemfuno ephezulu kwitekhnoloji, yomelele ngokubanzi, inzima yesicelo. Yamkela ingqiqo, iimodyuli, ulungelelwaniso lwembonakalo yoyilo olukrelekrele. Zilungele iintlobo zamaphepha, ileyibhile, amakhadi, ibhokisi yokupakisha, ngakumbi kwimveliso ngombane ongashukumiyo, ukuzitywina, ibhokisi yeplastiki enemigca emininzi njl njl njl. Kukho umsebenzi onganyanzelekanga ekukhetheni njengokubhaqa kabini, ukulungisa ngokuzenzekelayo, ukwala ngokuzenzekelayo njl.
Igama lemveliso: Ukondla okusemgangathweni kunye neqonga lokuprinta (ukushicilela kwe-UV) / isantya esiphezulu sokondla okukhohlakeleyo kunye neqonga lokushicilela (ushicilelo lwe-UV)
Umzekelo: BY-TF01 / 02-400 (UV) / BY-HTF01 / 02-400 (UV)
Phawu: UV iqonga yoshicilelo iphuhliswa ngokungqinelana iqonga yethu umgangatho ekrelekrele yoshicilelo kunye phawu UV yoshicilelo kunye neemfuno zobugcisa. Umgangatho ophezulu, iqonga elisebenzayo elinengqondo. It ukufunxa iintlobo isicelo mveliso kunye namava, amkele ezikrelekrele, seemodyuli, ingqiqo ulungelelwaniso imbonakalo uyilo. Zilungele iintlobo zamaphepha, ileyibhile, amakhadi, ibhokisi yokupakisha, ngakumbi kwimveliso ngombane ongashukumiyo, ukuzitywina, ibhokisi yeplastiki enemigca emininzi njl njl njl. Kukho umsebenzi onganyanzelekanga ekukhetheni njengokubhaqa kabini, ukulungisa ngokuzenzekelayo, ukwala ngokuzenzekelayo njl.
Igama lemveliso: Umatshini ophindaphindiweyo oqhelekileyo oprinta i-TTO Umgangatho ohlaziya umatshini oprintayo we-UV / Isantya esiphakamileyo somshicileli we-UV
Umzekelo: BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV / BY-HR450-UV
Phawu: zenzelwe iintlobo zeleyibhile kunye nokupakishwa imfuneko umboniso. Ngokwemfuneko yetekhnoloji yokuprinta ileyibheli yendabuko kunye nokufaka iikhowudi kwimpawu yeelebheli, sizamile ukufikelela "kumatshini omnye ngokusetyenziswa okuninzi, kufanelekile ukubuyela umva kwefilimu kunye nokubuyiselwa kwelebheli kwakhona". "Umatshini omnye onemisebenzi eliqela, ulungele umshicileli weTTO kunye nenkqubo yokuprinta ye-UV ngokunjalo". "Umatshini omnye oneemodyuli ezininzi, iimodyuli kubume, abasebenzisi banokwenza ukhetho lweemodyuli ngokweemfuno zabo zemveliso". Olu lolona khetho lubalaseleyo kwileyibhile kuluhlu kunye nakwifilimu ekufakweni kweekhowudi.
Igama lemveliso: feeder esemgangathweni okrelekrele
Ukungeniswa ngaphakathi: Umatshini wokondla okrelekrele, sisixhobo sethu esitsha sokuphucula ukutya, esincinci kwaye silula. Ukwamkelwa kwemveliso ebanzi, ukufakwa ngokulula, ukuhanjiswa okuchanekileyo kunye nokuvula izibuko lonxibelelwano, eliza kuthatha indawo yabasebenzi.
Ukuhanjiswa kumgca wokupakisha, amakhadi okondla kunye nothungelwano kumgca wemveliso okhoyo ukuze kufezekiswe ukuhanjiswa kwezinto. Uqwalaselo lunenkqubo yokufumana kabini, ukufunyanwa kwezinto, ukungasebenzi kwealam. Inkqubo yayo yokulawula yi-HMI kunye ne-PLC, ukuseta ipharamitha kulula kwaye kufanelekile.
Phawu: iphepha le-alamu ezimbini kunye nokumisa, ukubala, ukusebenza ngokobungakanani bexesha kunye nexesha, Akukho mveliso ye-alamu kunye nokumisa, ukuzilawula okanye ukulawula okuvela ngaphandle ukuqala imveliso yokondla. Ilungele iintlobo zekhadi, ileyibhile, iincwadi, iphepha elisongiweyo, iphepha lomzimba kunye neentlobo zemveliso yephepha.
Ukutya okwexeshana okumgangatho ophezulu kunye nenkqubo yokudibanisa
Isantya esiphezulu sokondla izitishi ezininzi kunye nenkqubo yokuhlangana
Inkqubo entsha yokondla ekrelekrele kunye nenkqubo yokuhlangana
Umzekelo: BY-MFJ3000-06 / BY-MFJ6000-06 / BY-MFJ6000-07
Phawu: sisixhobo sethu sokuqala somncedisi kumatshini wokupakisha, othathe indawo yokusebenza kwabantu kwiintlobo zokuhlelwa kwemveliso eprintiweyo ngokulandelelana, njengelebheli enye, iphepha elinombala, iincwadi, iincwadi, amakhadi kunye neCD njl.njl. Uphuhliso lwayo lusekwe kwimodyuli, kwinethiwekhi umxholo woyilo, ukulandela ngokukhawuleza kwisantya, ngokuchanekileyo kunikezelo.
Igama lemveliso: ukondla imaski yobuso esemgangathweni kunye nomatshini wokuprinta （KN95）
Umzekelo: BY-TF04-300 (KN95)
Phawu: isuka kwiqela lobuchwephesha kwi-feeder. Uyilo ngokugqibeleleyo, ubumbano lwentsebenzo, uzinzo oluphezulu, ngakumbi isuti kwimveliso yemaski yobuso. Kungenxa yesigqubuthelo sobuso esilahlayo kunye ne-N95 / KN95 yokondla ubuso kunye nokushicilela. Kwaye inokudityaniswa kunye nomatshini osele ukhona. Abasebenzisi banokukhetha ukondla okuqhubekayo okanye ukondla okungapheliyo ngokwemfuno yemveliso. (Qaphela pls: kukho umahluko othile kwimaski yobuso yokondla kunye nokuprinta).
Igama lemveliso: Isondli semaski esemgangathweni
Imodeli: BY-TF04-300 (imaski yobuso elahlayo)
Phawu: isuka kwiqela lobuchwephesha kwi-feeder. Uyilo ngokugqibeleleyo, ubumbano lwentsebenzo, uzinzo oluphezulu, ngakumbi isuti kwimveliso yemaski yobuso. Kungenxa yokondla imaski ebusweni. Kwaye inokudityaniswa kunye nomatshini osele ukhona. Abasebenzisi banokukhetha ukondla okuqhubekayo okanye ukondla okungapheliyo ngokwemfuno yemveliso. (Qaphela pls: kukho umahluko othile kwimaski yobuso yokondla kunye nokuprinta).
Igama lemveliso: Ukondla ubuso ngesantya esiphezulu kunye nomatshini wokushicilela (i-KN95)
Phawu: isuka kwiqela lobuchwephesha kwi-feeder. Uyilo ngokugqibeleleyo, ubumbano lwentsebenzo, uzinzo oluphezulu, ngakumbi isuti kwimveliso yemaski yobuso. yenzelwe ukondla nokushicilela i-N95 & KN95.